I-infographics: Ukwenza iikhowudi ze-QR ukuba zivavanywe | Martech Zone
NgoMvulo, Agasti 8, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Abahlobo bam bayazi ukuba andinguye othanda iikhowudi ze-QR (Ukuphendula ngokukhawuleza). Ngexesha ndibona ikhowudi ye-QR, misela ukuba ndifuna ukuyiskena, vula ifowuni yam ephathekayo, vula usetyenziso lokuskena ikhowudi… kwaye ndiyivavanye-ndingayichwetheza idilesi yewebhu. mbi… ewe, benditshilo!
Kubonakala ngathi ukwamkelwa kwekhowudi yeQR is Umceli mngeni omkhulu. I-58% yabo baphononongiweyo bebengazazi iikhowudi ze-QR. I-25% yabo baphononongiweyo babengazi nokuba bayintoni! Ekukhuseleni iikhowudi ze-QR, ayizizo zonke iindaba ezimbi. Abantu baya kusebenzisa iikhowudi ze-QR xa belindele isaphulelo kwaye amanye amashishini awasebenzisela ukufumana idatha ngokufanelekileyo.
Imizekelo embalwa endiyibonileyo endicinga ukuba yayilusetyenziso lweKhowudi zeQR:
Kwivenkile yokutyela eAtlanta, imenyu isebenzisa iikhowudi zeQR ukuze umfundi ajonge ulwazi olongezelelekileyo ngesondlo kwimenyu ekwi-intanethi.
Kwinkomfa yeWebtrends, iikhamera zacwangciswa kwiseshoni nganye yenkomfa ukuze zifake ulwazi lwebheji yeendwendwe. Oku kuvumele iqela ukuba lichonge ukuba zeziphi iiseshoni ezazithandwa kakhulu.
Ukuthumela amakhuphoni nge-imeyile kubamkeli. Nangona kunjalo, iibhakhowudi zisebenza ngokuchanekileyo kunye neekhowudi zeQR. Kwaye iiskena zebhakhowudi zixhaphake kwiindawo zokuthengisa.
Luluphi uzalisekiso oluluncedo olubonileyo ngokusebenzisa iikhowudi zeQR?
Ndikwacinga ukuba sisecicini lokusebenzisa itekhnoloji yokujonga kunye nokuqonda kude kakhulu kuneekhowudi zeQR.
Agasti 8, 2011 ngo-6: 28 PM
Ndabhloga malunga neekhowudi zeQR emva ngoDisemba ka-2010 ( http://kremer.com/qr-codes-link-brick-and-mortar-to-online Nazi ezinye zeengcebiso zam….
Ivenkile ye-Facebook uyayithanda: "Uyakonwabela ukuthenga apha? 'Njengathi' kuFacebook. Skena le khowudi ngefowuni yakho ephathekayo. Yiba ngowokuqala ukufumana izibonelelo ezinkulu kunye nezaphulelo kwiphepha lethu likaFacebook. ”
Ukugcina Bhalisela iileta ze-imeyile okanye izilumkiso zombhalo weSMS. Ingcinga efanayo nale ingasentla. Qiniseka ukuba unikezela ngomvuzo wokubhalisa. Qiniseka ukuba iphepha lokufika lekhowudi ye-QR lilungele ukuhamba.
Kwivenkile yedatha okanye ulwazi ngesaveyi: "Sitshele kancinci malunga nawe kwaye ufumane amakhuphoni asimahla". Yiba nephepha elifutshane elinobuhlobo lophando olusebenzayo kwiphepha lokugqibela ekubeni likwivenkile esecaleni abanokuyisebenzisa ngoku.
Iintengiso ezishicilelweyo, iincwadana ezinemifanekiso, amakhadi oshishino: “Fumana ulwazi malunga noku. Skena le khowudi yeQR kwiselfowuni yakho. ” Iikhowudi ze-QR zintsha, kodwa uninzi lweendaba eziprintiweyo zinexesha lokukhokelela kwiinyanga. Thetha nomthengi wakho malunga nokuba zeziphi izicwangciso zokuprinta okwangoku kunye neenyanga ezintandathu ukusukela ngoku.
Ukucinga ngaphaya kwehlabathi lokuthengisa. Kutshanje ndiye ndathetha nabathengisi kunye nemiboniso kwimyuziyam enkulu. Ndicebise ukuba babeka ikhowudi ye-QR kwiindawo ezithile zemiboniso. Ikhowudi inokuqhagamshela kwiphepha labo leWebhu kwinto ebonisiweyo, okanye ikhonkco kwindawo efanelekileyo engaphandle kweWebhu.